Web 2.0, ဗီဒီယို | Martech Zone
Web 2.0၊ ဗီဒီယို
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 6, 2007 Douglas Karr
ဒီအပေါ်တင်ခဲ့သည် Problogger နှင့်လုံးဝစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ဗွီဒီယိုကိုသင်မတွေ့ပါက၊ သင်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်သည်။ KSU, ဒီဂျစ်တယ် Ethnography
စိတ်မရှိပါနဲ့ Careerbuilder! iFilm သည် Super Bowl ကြော်ငြာများကိုသယ်ဆောင်သည်
မှတ်ချက်များ Blog ည့်သည်များသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ရှုစေခြင်း
6:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 31 တွင်
Wow, ဒါက Web 2.0 ရဲ့အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဖွင့်ဆိုချက်ပဲ။ အလွန်ကောင်းစွာပြုသောအပါမောက္ခ!
ငါဒါဖြစ်ပျက်ငါ posted ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်“ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်” (ယနေ့ဤဗွီဒီယိုကိုမမြင်မီ) ။ Web 2.0 သည်လူများအားဆက်သွယ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ သို့သော်၎င်းထက်ကျော်လွန်သည် ၎င်းသည်အင်တာနက်ကိုဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။